မြန်မာကဗျာများနှင့် စာအိတ်များ (၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များ) – Myanmar Photo Archive
မြန်မာကဗျာများနှင့် စာအိတ်များ (၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များ)
စာအိတ်ဆိုသည်မှာ စာတစ်စောင်ထည့်ရန်ဆိုသည်ထက် ပိုမိုသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ စာအိတ်တစ်လုံးသည် အနုပညာလက်ရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သာမန်စာပို့စာအိတ်တစ်လုံးတွင်မူ ရှေ့ဘက်တွင် အစက်အစက်များ ချထားသော မျဉ်းလိုင်းများသာရှိသည်။ ရှေးအခါက ချစ်သူများ တစ်ဉီးနှင့်တစ်ဉီး ကွင်းကွာနေခိုက် မေတ္တာဘွဲ့ကဗျာများရေးသားလေ့ရှိကြသည်။ ကဗျာများသည် နူးညံ့ကာ လွမ်းဆွတ်၊ တမ်းတမှုတို့ကို ဖော်ကျူးသည်။ ကဗျာရေးစပ်သူသည် ကြက်တူရွေး၊ အိမ်မွေးငှက်တစ်ကောင်ကောင်ဖြင့် ချစ်သူထံ စာပို့လွှတ်တတ်သည်။ ထိုစဉ်က စက္ကူ မပေါ်သေးသဖြင့် ပေဖူးလွှာခေါ် ပေရွက်ပေါ်တွင် ကဗျာစာသီကုံးရေးဖွဲ့ကြသည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များဆီက လူငယ်ကဗျာဆရာများအကြား သုံးကြောင်းကဗျာများ ခေတ်စားလာသည်။ အကြောင်းမှာ စာဖတ်သူများကို ပြောလိုသော အကြောင်းအရာကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ စံပြသုံးကြောင်းကဗျာတစ်ပုဒ်ကို တင်ပြရသော် ဆရာ တင်မိုး၏ ဧည့်သည်ကြီး ကဗျာကို တင်ပြပါရစေ။ □ ဆေးလိပ်လည်းတို နေလည်းညို ငါ့ကို အိမ်ပြန်ပို့ကြပါတော့။
နောက်ထပ်ထင်ရှားသော ကဗျာဆရာတစ်ဉီးမှာ မောင်ပန်းမွှေးဖြစ်ကာ သူ့အရေးအသား ကဗျာများသည် ကျစ်လစ်ကာ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ စာအိတ်ထုတ်လုပ်သူများက စာအိတ်များထုတ်လုပ်ရာတွင် စာအိတ်ပေါ်တွင် ကဗျာပါအောင် ကဗျာဆရာများနှင့် သရုပ်ဖော် ပန်းချီဆရာ သို့မဟုတ် ကာတွန်းဆရာတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေသဖြင့် သရုပ်ဖော်ပန်းချီဆရာက ကဗျာ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပါယ်ပေါ်လွင်အောင် သရုပ်ဖော်ပေးရသည်။ ဤသို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသော အနုပညာအတွဲအဖက်အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ကြသူများမှာ ကဗျာဆရာ မောင်ပန်းမွှေးနှင့် သရုပ်ဖော်ဆရာ ဆန်းထွန်းတို့ဖြစ်သည်။ □ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် မင်းထက်ချစ်တယ် မင်းထက်တစ်ကလေးပိုလိုက်မယ်။ နောက်တစ်ပုဒ်မှာ ကာတွန်း ဆန်းထွန်းက ကဗျာဆရာတင့်နိုင်ကဗျာကို သရုပ်ဖော်သော ကဗျာ . . . □ မေတ္တာအရေး လှစ်ကာမေးတော့ ချစ်တာလေးတွေ ပြောပြမယ်။ ပန်းချီကြည်သိန်းနှင့် ကဗျာဆရာ ဖျာပုံမောင်အင်ကြင်းတို့၏ ကဗျာနှင့် သရုပ်ဖော် . . . □ မုန်းတာမေ့တာ ခွဲခွာတာကို ခေါင်းလောင်းထိုးပြီး လှူလိုက်မယ်။ ပန်းချီကြည်သိန်းနှင့် ကာတွန်း/သရုပ်ဖော်ဆရာ ဆန်းထွန်းတို့အပြင် အခြား သရုပ်ဖော်ပန်းချီဆရာများကလည်း ကဗျာဆရာများဖြစ်သော မောင်ပန်းမွှေး၊ ဖျာပုံမောင်အင်ကြင်း၊ တင့်နိုင်နှင့် ကိုဇော် (ကမ္ဗောဇ)တို့အတွက် သရုပ်ဖော်ပုံများ ရေးဆွဲပေးကြသည်။ ဤကဗျာပါသော စာအိတ်များသည် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များဆီက လူငယ်လူရွယ်ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ပြလျှက်ရှိရာ နှစ်သက်မြတ်နိုးစဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။●
ဆန်းလင်းထွန်းသည် အက်ဆေး၊ ကဗျာ၊ ပုံပြင်တိုများနှင့် ဝတ္ထုများကိုမြန်မာဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားသော အလွတ်တန်းစာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏အရေးအသားများတွင် ဂျော့ဂျ်အိုဝယ်လ်ဝတ္ထုအားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်ဖတ်ခြင်းနှင့် အခြားအက်ဆေးများ၊ Big Bunny ရောက်ရှိလာခြင်း၏ထူးခြားမှုနှင့် အခြားပုံပြင်တိုများ၊ နှင့်သူ၏နောက်ဆုံးရေးသားထာသော အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာတစ်ယောက် တို့ပါဝင်သည်။ သူသည် ရန်ကုန်တွင်ဇနီး၊ သားနှစ်ယောက်နှင့်အတူနေထိုင်သည်။